Gobolka Gebiley iyo Sida Sida Ay Diiwaangelintu Uga Socoto” Qaybta Labaad | Saxil News Network
Gobolka Gebiley iyo Sida Sida Ay Diiwaangelintu Uga Socoto” Qaybta Labaad
April 3, 2015 - Written by admin
Hargaysa (Saxil News.com)-Kaadhaka Jinsiyadda ee la siinayo dadka muwaadiniinta ah ee u dhashay Somaliland waxaa fulinaysa xukuumadda gaar ahaana wasaaradda arrimaha gudaha, iyadoo samaynta kaadhadhka Jinsiyadda qandaraas lagu siiyay shirkad la yidhaahdo SAHALNETWORK.NET, taasi oo ay leeyihiin muwaadiniin u dhashay Somaliland.
Hadaba Kormeerkani aanu ku soo samaynay goboladda iyo degmooyinka dalka ee ay ka socoto diiwaangelinta madaniga ah, ayaa waxa ka mid ah gobolka Gabiley iyo degmooyinka iyo tuulooyinka hoos yimaadda, iyadoo dhamaanba goobihii kala duwanaa ee aanu soo marnay ay si wanaagsan uga socotay hawsha diiwaangelintu.
Meello kala duwan oo aanu soo indho-indhaynay ayay si habsami ah dadku isaga diiwaangelinayeen, iyagoo weliba si aad ah darbanaa in ay is-diiwaangeliyaan si ay u helaan kaadhka jinsiyadda ee Somaliland.
Qaar ka mid shaqaalaha ka socda wasaaradda daakhiliga oo iyadu hawshani fulinaysa oo aanu kula kulanay goobaha ay ka socoto diiwaangelinta madaniga ah ee gobolka Gabiley oo aanu ka waraysanay sida ay hawshu u socoto ayaa noo sheegay in diiwaagelinta madaniga ahi ay si caadi ah u socoto, isla markaana ay dadka is-diiwaangelinayaa soo badanayaan maalinba maalinta ka danbaysa.
Waxa kale oo ay hawl-wadeenadda ka shaqaynaya diiwaangelinta bulshadda ee ka socda wasaaradda arrimaha gudaha ay noo sheegeen in bulshadda ku dhaqan gobolka Gabiley ay si weyn ugu soo qul-qulayaan goobaha ay diiwaangelintu ka socoto, kuwaasi oo xiisaynaya in ay is-diiwaangeliyaan si ay u helaan kaadhka Jinsiyadda muwaadin-nimadda ee Somaliland.
Hawl-wadeenadani ka socda wasaaradda daakhiliga oo aanu wax ka waydiinay in mudaddii ay hawshani ka wadeen gobolka Gabiley iyo deegaamadda hoos yimaadda in wax caqabado ah la kulmeen dhinac kastaba ha ahaadaane, waxay sheegeen in aanay haba-yaraatee marnaba la kulmin wax carqalad ama dhibaato ah, haddii ay xagga bulshadda tahay iyo haddii ay xagga qalabka tahayba.
Waxaanay ay sheegeen hawlwadeenadu in goobaha magaaladaga ee ay ka socoto diiwaangelintu ay qaar tiro badan, isla markaana goobahaas qaybo ka mid ahi ay dadka iska diiwaangelinayaa ku yar yihiin. “Waxaa dhici karta in dadka badidoodu aanay weli is-diiwaangelin, goobaha qaar waxaa laga yaabaa in ay dad koobani gaadhaan, taasina waxaa ugu wacan bay ila tahay maadaama oo ay magaaladda gudaheediina tahay, goobuhuna ay badan yihiin. Laakiin in badan oo qaadatayna waxay jiraan.”
Sidoo kale xubno ka mid ah madax-dhaqameedka ka hawl-gelaya goobaha diiwaangelinta madaniga ah laga wado, oo iyagu dadka hubinaya in uu muwaadin dhab ah yahay in kale, oo aanu wax ka waydiinay sida ay hawshaasi u socoto waxay noo xaqiijiyeen in mudadda ay diiwaangelinta madaniga ahi ka socotay Gabiley aanay la kulmin wax caqabad ah, isla markaana ay hawshu u socoto sidii loogu tallo-galay.
Dhinaca kale dadweynaha iyagu goobahaasi iska diiwaangelinaya oo aanu dareenkooda waydiinay sida ay u arkaan waxay noo sheegeen in ay si weyn ugu faraxsan yihiin in ay is-diiwaangeliyaan, si ay marka danbena u helaan kaadhkooda Jinsiyadda ee cadaynaya muwaadin-nimadooda.
Dhinaca kale maamulka gobolka iyo ka degmadda Gabiley oo aanu iyagna wax ka waydiinay sida ay hawsha diiwaangelinta madaniga ahi uga socoto gobolka, waxay cadeeyeen in si aad ah ay dadku ugu heelan yihiin in ay is-diiwaangeliyaan. Waxaanay masuuliyiinta heer gobol iyo heer degmo ee Gabiley si weyn ugu mahad naqeen guud ahaanba bulshadda ku dhaqan gobolkaasi oo ay ku amaaneen in ay si wanaagsan ugu soo baxeen qaadashadda kaadhka dhalashadda, kuwaasi oo ay sheegeen in ay tirro aad u badani muddo kooban isku diiwaangelisay.
Waxaanay u soo jeediyeen dadka aan iyagu weli is-diiwaangelinin in ay ku dedaalaan sidii ay isku diiwaangelin la haayeen ee ay u qaadan lahaayeen kaadhka dhalashadda, kaasi oo ay sheegeen in haddii imika si bilaash ah ay ku qaadan waayaan aanay mar danbe fursad u heli doonin in ay helaan, isla markaana kaadhkani jinsiyadu uu yahay midka kala cadaynaya qofku dalka uu u dhashay.
Si kastaba ha ahaatee guud ahaanba gobolka Gabiley iyo degmooyinka hoos yimaadda ayay si la mid uga socotaa diiwaangelinta bulshadda, sida degmooyinka Wajaale, Arabsiyo, Alay-baday iyo magaalooyinka kale ee Geed-balaadh, Kala-baydh, Agabar iyo tuulooyinka kaleba.
Diyaariye:Axmed . Maxamuud Cismaan(Mr:Duni Cusub)